Zọ abụọ iji nweta nseta ihuenyo na LG G3 | Gam akporosis
Manuel Ramirez | | LG, Nkuzi
A na-eji nyocha nyocha maka ọtụtụ ihe, site na ịnwe ike izipu ihe anyị na-ahụ na weebụsaịtị dị otú ahụ site na ịkekọrịta onyonyo site na WhatsApp ma ọ bụ netwọkụ mmekọrịta, ma ọ bụ iji debe ndekọ nke anyị nwetara na egwuregwu dị otú ahụ ma gosi ha ndị enyi anyị ka ha ghara ịfufu ya. Site na ọnụọgụ nke ihe na-eme site na ihuenyo anyị, inwe ike ịme ụdị njide a dị mkpa n'ọtụtụ ọnọdụ.
Maka ọtụtụ gam akporo smartphones, were nseta ihuenyo A na-enweta ya site na ịpị igodo olu na ike n'out oge. Ọ bụrụ na ị nwere ekwentị Samsung, ihe ahụ na-agbanwe ebe a site na ịpị ụda olu na ụlọ. Na LG G3 isi Nchikota bụ otu ihe ahụ na olu ala na n'otu oge ahụ, mana site n'inwe akụkụ nke bọtịnụ dị na azụ, Samsung edozila ụzọ ọzọ iji nweta ihuenyo.
Secondzọ nke abụọ a iji nwee ike nweta nseta ihuenyo na LG G3 ọ bụ na ngwa QuickMemo +, nke anyị na-akọwa n'okpuru.
1 Nseta ihuenyo na igodo ike
2 Nseta ihuenyo site na iji QuickMemo +
Nseta ihuenyo na igodo ike
Dịka anyị kwurula na mbụ, ụzọ iji nweta nseta ihuenyo na bọtịnụ anụ ahụ na LG G3, na-enweta site na ịpị n'otu oge ahụ ma ike ma olu. Agbanyeghị na ọ nwere ike ịbụ ntakịrị ihe na mbido, omume emere ga-abanye na mmegharị nke ịme nseta ihuenyo.
Nseta ihuenyo site na iji QuickMemo +
Ewezuga ịnwe usoro igodo a kpọtụrụ aha, enwere ụzọ ọzọ ị ga - esi nweta nseta ihuenyo na G3, nke a wee iji otu nhọrọ n’ime ngwa QuickMemo +.
Ka ị na-eme ẹkedori Google Ugbu a site n'ụlọ button ọ bụla ọnụ na gam akporo 4.2, ka họrọ QuickMemo + na mgbanaka nke na-egosi mgbe ịpị ma jide ọtụtụ sekọnd n'ụlọ, ị ga-enwe QuickMemo + n'aka nri iji họrọ ya. Site na ịme ihe a ị ga-ewere nseta ihuenyo ozugbo, site na ebe a ị nwere ike ịdọrọ ya, mee nkọwa ma ọ bụ chekwaa na ihe ngosi ihe oyiyi gị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » LG » Esi nweta nseta ihuenyo na LG G3
Site na ijide bọtịnụ ụlọ m ga-enweta mgbanaka mana nchọnchọ ọchụchọ google ga-emepe ozugbo, yabụ nhọta ihuenyo mgbe mmeghe ngwa ngwa ahụ sitere na google ọ bụghị site na ihe m chọrọ ijide. Nwere ike ịgwa m otu esi agbanwe ya?
Otu ihe ahụ na-eme m
M jisiri ike na-eme na ihuenyo naanị site na-emeghe Ndenye memo. On oyiyi ị chọrọ weghara na ihuenyo na anyị na-etinye azọpụta na ọ na-enye gị nhọrọ ịzọpụta ya na gallery
Amaghim ka esi ebudata lg mgbịrịgba na ekwe nti m
Ise egwuregwu gam akporo iji nwee ọ vacationụ ezumike ezumike a